ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ El Clasico နဲ့ ဘာစီလိုနာ ရဲ့ ရင်လေးဖွယ်အနာဂါတ် - Sports Myanmar
မနေ့ ညက တုန်းက El Clasico ပွဲ ကြည့်ဖို့ စောစော အိပ်ယာ ၀င်ခဲ့ရ ပါတယ် ။ လာလီဂါ ပွဲတွေ က မြန်မာ စံတော်ချိန် နဲ့ သဟ ဇာတ မဖြစ်တာ ကြောင့် ဒီလို ပွဲမျိုးက လွဲရင် စောင့်ကြည့်လေ့ မရှိ ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် El Clasico လို ပွဲမျိုး ကတော့ လက်လွှတ် မခံ သင့်တဲ့ အမျိုးအစား ထဲ မှာ ထိပ်ဆုံးက ပါနေပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ၁ နာရီ ခွဲမှာ တီဗွီ ရှေ့ ကို ရိက္ခာ အပြည့် အစုံ နဲ့ အဆင်သင့် ရောက်လာ ခဲ့ ပါတယ် ။
ပွဲက တော့ အားလုံး သိပြီးတဲ့ အတိုင်း ဂိုး မရှိ သရေ ရလဒ် နဲ့ အဆုံးသတ် သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ကွင်းထဲ က ကစားပုံ အရ ပြောရရင် တော့ ရီးရဲ မက်ဒရစ် က ပိုကောင်း ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း မှာတော့ ဘာစီလိုနာ က ဂိုး နိုင်တဲ့ အခွင့် အရေး နဲ့ ပိုနီးစပ် ခဲ့ တာပါ ။ ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ ပွဲမျိုး မဟုတ်ပေမယ့် El Clasico ပရိသတ် စစ်စစ်တွေ ကတော့ ဒီပွဲ ကို မကြိုက်ဘူး ၊ El Clasico အရသာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောမှာ အသေအချာ ပါပဲ ။
ရီးရဲ ဟာ ဒီပွဲ အတွက် သေချာ ပြင်ဆင် လာခဲ့ ပါတယ် ။ ဘာစီလိုနာ ကို ဘောလုံး မကိုင် နိုင်အောင် ၊ ဘောလုံး ပေးမယ့် လမ်းကြောင်းတွေ ကို စုပြုံ ပိတ်စို့ ပြီး ကိုယ့်ခြေ ထဲ မှာ ဘောလုံး ရလာတာ နဲ့ တောင်ပံ တွေ ကို ထုတ်ပြီး ဖြတ်တင် ဘောတွေ လုပ်တယ် ၊ အခွင့်သာရင် ကွင်းလယ်လူ တွေ က ဂိုးရှေ့ ကနေ ကန်သွင်းဖို့ ကြိုးစား ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီဗျုဟာက အလုပ် ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အလုပ်တော့ မပြီးမြောက်ခဲ့ ပါဘူး ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ရီးရဲ မှာ ဖြတ်တင်ဘော ကို ကောင်းကောင်း အသုံးချ နိုင်တဲ့ အထောင်တိုက်စစ်မှုးကောင်း မရှိ သလို ရီးရဲ ကိုယ်တိုင် ကလည်း ဒီလို ဖြတ်တင် ခေါင်းတိုက် ကစားကွက် နဲ့ အသားကျ နေတဲ့ အသင်း မဟုတ်ခဲ့ လို့ပါပဲ ။ ဒါကြောင့် တစ်ပွဲလုံး ဖြတ်တင် ပေးပို့မှုတွေ အများကြီး လုပ်ခဲ့ ပေမယ့် ပီကေး ရှင်းထုတ် ရတဲ့ တစ်ကြိမ်ကလွဲရင် ကျန်တာတွေ မထိရောက် ခဲ့ ပါဘူး ။
ဘာစီလိုနာ ကတော့ ကစားကွက် ကို မရှိခဲ့ တာပါ ။ အသင်းလိုက် ဟန်ချက် ပျက်နေ ခဲ့သလို မက်ဆီ ကလွဲရင် ဖန်တီးမှု ကောင်းကောင်း မလုပ်နိုင် ခဲ့တာ ကို တွေ့ခဲ့ရ ပါတယ် ။ မက်ဆီ ကလည်း ကဏ္ဍ အားလုံး ကို တာဝန်ယူ နေရသလို ကွင်းလယ် အထိ ဆင်းဆယ် နေရလို့ ဂိုးပေါက် ကန်သွင်းမှုတောင် မလုပ်ခဲ့လိုက် ရ ပါဘူး ။ တကယ်ကောင်းတဲ့ ဖန်တီးမှု တစ်ခု ကိုတော့ ဂျော်ဒီ အယ်ဘာ က ဖြုန်းတီး ပစ်ခဲ့ ပါတယ် ။
ပီကေး နဲ့ ရာမိုစ့် တို့ ကတော့ အကျပိုင်း ကို ရောက်လာ ပေမယ့် အရေးပါသူတွေ ဖြစ်နေဆဲ ဆိုတာ ကို သေချာ ပေါက် ပေးရမယ့် ဂိုး တွေ ကို တစ်ဂိုးစီ ဖျက်ထုတ် တားဆီးရင်း ပြသသွား ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီည မှာ ဘာစီလိုနာ ဘက် က စတီဂျန် ၊ နဲ့ မက်ဆီ တို့ ကောင်းခဲ့ ကြပြီး ရီးရဲ ဘက် မှာတော့ အစ္စကို ၊ ဗယ်ဗာဒီ တို့ ကောင်း ခဲ့ကြတယ် လို့ ပြောလို့ ရနိုင် ပါတယ် ။
ဒိုင်ရဲ့ ကိုင်တွယ်ပုံ ကိုလည်း အရမ်း သဘောမကျမိ ပါဘူး ။ ဆုံးဖြတ်မှုတွေ မှာ မှန်ကန် ပေမယ့် အဝါတွေ အရမ်းပြပြီး ပွဲကို ထိန်းတာ က သဘောမကျ စရာ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဂါရတ်ဘေးလ် ရဲ့ ဂိုး ကို ခွင့်မပြု ခဲ့တာ ကတော့ VAR မှန်ခဲ့တယ် လို့ ဆိုရမှာပါ ။ ဒိုင် အတွက် အမှတ်ပေးရရင်တော့ ၁၀ မှတ် မှာ ၆ မှတ် လောက် ပါပဲ
သရေ ရလဒ် ထွက်ပေါ်ခဲ့ တာ ကြောင့် ဘာစီလိုနာ တို့ အဆင့် ၁ မှာ ဆက်မြဲ ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အသင်း ရဲ့ အနာဂါတ် ကတော့ ရင်လေး စရာ ပါပဲ ။ တစ်ချိန် တုန်းက ဥရောပ ကို စိုးမိုး ခဲ့တဲ့ ကစားဟန် ဟာ လုံးဝ ကို ပျောက်ကွယ် ခဲ့ ပါပြီ ။ ဒီနေ့ ပွဲ မှာ ကစားသွားတဲ့ ပုံစံ က အခြား အသင်း တစ်သင်း ကို မြင်လိုက်ရ သလိုပါပဲ ။
မက်ဆီ ကတော့ အရင် မက်ဆီ အတိုင်းပဲ ရှိနေ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျန်တဲ့ သူတွေ က အရင်လို မဟုတ်တော့ ပါဘူး ။ မက်ဆီ ဘောလုံး ရသွားရင် သူနဲ့ တွဲ ကစားမယ့် သူ တွေ က အနားမှာ ရှိမနေ ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် နေရာလွတ်တွေ ဆီ ဆွဲပြေးရင်း ၀ိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ ခံရမှု နဲ့သာ အဆုံးသတ်သွား ခဲ့ ပါတယ် ။ ဆွာရက် ခြေကျ လာတာ သိပ်ကို သိသာ နေပါတယ် ။ အစားထိုးဖို့ အမြန် လုပ်ရ တော့မှာပါ ။
ဒီကနေ့ ပွဲ မှာ စိတ်အပျက်ရ ဆုံး ကတော့ အန်တွိုင် ဂရစ်ဇ်မန်း ပါပဲ ။ သူ့ကို ခေါ်ထားတာ ဟာ ဒီလို ပွဲမျိုးတွေ မှာ အသုံးဝင်ဖို့ ပါ ။ ဒါပေမယ့် ပြင်သစ်သား ကတော့ သာမာန် ကစား သမား တစ်ဦးမျှ ပါပဲ ဆိုတဲ့ ခြေစွမ်းမျိုး နဲ့သာ ကစားသွားခဲ့ ပါတယ် ။ သန်း ၁၂၀ နဲ့ ၆ ယူရို ပေးရတဲ့ ကစား သမား တစ်ဦး အနေနဲ့ ဒီ ထက် အများကြီး လုပ်ပြ နိုင်ရမှာပါ ။ စိတ်အပျက်ရဆုံး ကစား သမား ပါပဲ ။
ဘာကာ နည်းပြ ဗယ်ဗာဒီ ကို ပရိသတ် တွေ ဘာလို့ စိတ်ပျက် နေကြသလဲ ဆိုတာ ဒီညပွဲ မှာ ကောင်းကောင်း နားလည် သွားခဲ့ ပါတယ် ။ အသင်း က ပြိုင်ဘက် ရဲ့ ကစားကွက် အောက် ရောက်နေတာ ကို ဘာမှ မပြောင်းလဲ နိုင်ခဲ့ ပါဘူး ၊ အန်ဆု ဖာတီ ကို လူစားလဲထည့်တာ လောက်ကတော့ လူတိုင်းလုပ်တတ် ပါတယ် ။ အမှန် ဆိုရင် ဒီထက်တောင် စောပြီး လဲခဲ့သင့်တာပါ ။
ဗယ်ဗာဒီ ရဲ့ နည်းဗျုဟာ က မက်ဆီ ကို ပွဲထုတ်မယ် ၊ ကျန်တဲ့ သူတွေ ဘယ်သူပါပါ ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်နေ ပါပြီ ။ ဒီတော့လည်း မက်ဆီ ရုန်းကန် ရတာ ၊ ဘာစီလိုနာ ရလဒ်တွေ ကျဆင်းတာတွေ ဟာ မဆန်းတော့ ပါဘူး ။ ဒီ နည်းပြ ကြီး နဲ့ ဆက်ပြီး စခန်း သွားနေ သရွေ့ ဘာစီလိုနာ တို့ အရင် တုန်းက ရွှေရောင် အချိန်ကာလ တွေ ကို ပြန်မရောက်မှာ သေချာ ပါတယ် ။
ရီးရဲ က ဇီဒန်း လက်ထက် မှာ ကစားပုံ ပြန်ကောင်း နေပါပြီ ။ ရိုနယ်ဒို မရှိတော့တဲ့ အချိန်ကာလ အတွက် သူတို့ ရဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေ စပြီး ရုပ်လုံး ပေါ်စပြု နေပါပြီ ။ မနှစ် က သူတို့ ဘာမှ မရခဲ့ ပါဘူး ၊ ဒီနှစ်လည်း ရချင်မှ ရဦး မှာပါ ။ ဒါပေမယ့် နောက် ၂ နှစ် အတွင်းမှာ တော့ ရီးရဲ ဟာ အရင်တုန်းက ရီးရဲ အဆင့်မျိုး ကို ပြန်ရောက် လာဖို့ အလားအလာ တွေ ကောင်းနေပါပြီ ။ ဘာစီလိုနာ က ရော နောက် ၃ နှစ် အကြာမှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေ မလဲ . . .
အဲ့ အချိန် ဆိုရင် မက်ဆီ လည်း အာဂျင်တီးနား ကို ပြန်ကောင်း ပြန်နေ လောက်ပါပြီ ။ အခု ခြေစွမ်း အတိုင်းသာ ဆိုရင် မက်ဆီ မရှိတော့မယ့် ဘာစီလိုနာ ဟာ ရိုနယ်ဒို မရှိတော့တဲ့ ရီးရဲမက်ဒရစ် ထက် ပိုပြီး ဒုက္ခ ရောက်မှာပါ ။ အဲ့အချိန် အတွက် ဘာစီလိုနာ တာဝန်ရှိသူတွေ ဘယ်လို ပြင်ဆင် ထားမှာလဲ . . .
သိချင် နေမိ ပါတယ် . . . . .